🥇 ▷ Neffos C7s wuxuu la imanayaa shaashadda 5.45-inji iyo Android 9 Pie ✅
Neffos C7s wuxuu la imanayaa shaashadda 5.45-inji iyo Android 9 Pie
Telefoonka cusub ee Neffos, waa ku saabsan yahay Neffos C7s, aalad taleefanka gacanta oo leh 5.45 inji shaashad ah iyo Android 9 Pie ah, gaar ahaan ku habboon adeegsadayaashaas oo raadinaya taleefan mobiil la awoodi karo oo leh astaamo farsamo oo aasaasi ah kuna filan inay fuliyaan hawlo maalmeedka.
Neffos C7s wuxuu u taagan yahay bixinta a shaashad la’aan, taasi waxay ka dhigan tahay inay leedahay gees sare meesha af-hayuhu ku yaallo iyo kamaraddiisa hore oo leh Flash flash, halka geeska hoose uu xoogaa yar yaraa, kaas oo leh qoraalka “Neffos”.
In kasta oo a taleefanka aan ka badnayn qiimaha € 100, Neffos C7s wuxuu bixiyaa naqshad macmal ah oo casri ah, oo leh kamarad gadaal ka taagan oo taagan, inkasta oo aanan halkan ka helin sawir qaade sawirka farta maxaa yeelay taleefankaan malaha shey noocaas ah.
Neffos C7s, faahfaahinta farsamada
Si aad si fiican ugu ogaatid faahfaahinta waxkasta oo ay Neffos C7s bixiso, waxaan ku tusi doonaa liiska Faahfaahinta farsamada, waa kuwan soo socda:
Shaashadda: 5.5 inji oo leh 1.440 x 720 pixels.
Processor: Processor-ka Octa-core
Kaydinta gudaha: 16 GB iyadoo ay suuragal tahay in la ballaariyo iyada oo loo marayo microSD kaararka illaa 128 GB.
Camera hore: 5 megapixels
Isku xirnaanta: WiFi, Bluetooth, 4G, iwm.
Durbaan: 2,600 mAh
Kaamerooyinkaaga gadaal, waa inaad taas ogaataa waxaa ka mid ah muuqaalka goobtas, waxqabadka HDR iyo autofocus si tayada sawirku u sarreeyo. Sida loogu talagalay 5 megapixel camera hore, muujiyo qaabka qurxinta iyo suurtagalnimada samaynta saameynta bokeh, marka lagu daro Nalalka LED-ga si fiican u iftiimiya nafsadaha daqiiqado iftiin hooseeya.
Waxyaabaha ku xusan qaybta warbaahinta badan, joogitaanka qof hadla oo tayo sare leh iyo cod-weyne, si uu adeegsaduhu ugu raaxeysto khibrad cod oo wanaagsan, ma aha oo kaliya marka uu ciyaaro dhawaaq kasta, laakiin sidoo kale wicitaan.
Neffos C7s, qiimaha iyo helitaanka
Maqnaanshaha ogaanshaha maalinta saxda ah ee bisha Sebtembar, taas oo noqon doonta goorta ay iib noqon doonto, haddii aan horay u ognahay qiimaha cusub Neffos C7s Waxay noqon doontaa € 99.90, taleefanka laga heli doono iibsashada websaydhka rasmiga ah iyo dukaamada kale ee internetka.